February 10, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
ပဲစောင်းလျားသီးကို စားဖူးလားရှင့်။ စာရေးသူကတော့ တောင်ပေါ်ဒေသမှာနေခဲ့တော့ ငယ်ငယ်တုန်းကအရမ်းစားပါတယ်။အရသာလည်းရှိတယ်။ ပဲစောင်းလျားသီးဟာအရသာရှိပြီး အာဟာရဓါတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါပဲ။ပဲစောင်းလျားသီးရဲ့ အရွက်၊ အမြစ်၊ အသီး၊ အပွင့်အားလုံးကိုစားလို့ရပါတယ်။ ပဲစောင်းလျားသီးရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ – အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုကာကွယ်ပေးခြင်း – Antioxidant တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ပဲစောင်းလျားသီးဟာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုသက်သာစေတယ် – ခေါင်းနှစ်ဖက်လုံးကိုက်တာ ခေါင်းတခြမ်းထဲကိုက်တာတွေက လူတိုင်းလိုလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ ပဲစောင်းလျားသီးဟာ အဲဒီလိုခေါင်းကိုက်တာတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး – ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက် သံဓါတ်မြင့်မာစွာပါဝင်လို့ မွေးလာတဲ့ကလေးပေါင်မပြည့်တာမျိုးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကိုလည်း ကျန်းမာစေပါတယ်။ အမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေခြင်း – ပဲစောင်းလျားသီးဟာ အမြင်အာရုံကို ကောင်းမွန်စေပြီး မျက်လုံးနဲ့ ဦးနှောက်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေခြင်း – အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး ၀မ်းချုပ်မှုကိုသက်သာစေလို့ Read more
လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ ပျံ့နှံ့လာသော ဘုရားပေါ်မှာ ချိန်းတွေ့နေတဲ့ စုံတွဲပုံမျာ
လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ ပျံ့နှံ့လာသော ဘုရားပေါ်မှာ ချိန်းတွေ့နေတဲ့ စုံတွဲပုံများ။ ။ ဘယ်တုန်းက ဘယ်ဘုရားမှာဆိုတာ တိတိကျကျ မသိရသေးပေမယ့် အခုလို မြင်ကွင်းမျိုးကို မြင်သူတိုင်းက ရှုံ့ချသင့်တာဖြစ်တာရယ် နောက်နောင်များတွင် အခြားအခြားသော လူငယ်စုံတွဲများ အခုလို လုပ်ရပ်မျိုးကို လုပ်ခဲ့မိရင် အခုလို လိုင်းပေါ်ရောက်ပြီး အရှက်ကွဲမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်အောင် ရှုံ့ချပြီး မျှဝေပေးကြပါ။ ပုံပါ လူငယ်စုံတွဲကို သိက္ခာကျလိုစိတ် လုံးဝမရှိပေမယ့် ခေတ်သစ်လူငယ်တိုင်း ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးကို မလုပ်သင့်ကြောင်း သိစေချင်သော ဆန္ဒဖြင့် တင်ပြေးလိုက်ပါသည်။ Unicode လူမှုကှနျယကျ Read more
လေမဖြတ်ဖို့ကာကွယ်ဆေး နှင့် ဒူးနာ၊ခါးနာ သမားများအတွက်…သိမ်းထား share ထားနော်…👍👇
လေမဖြတ်ဖို့ကာကွယ်ဆေး နှင့် ဒူးနာ၊ခါးနာ သမားများအတွက် ခါးနာ ဒူးနာ သူများအတွက် မခက်ပါ ဘဲဥကိုပွက်နေသော ရေနွေးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနစ်ခန့်ပြုတ်လိုက်ပြီး ဆယ်ယူလိုက်ပါ ။ ဆယ်ယူလိုက်သည့် ဘဲဥကို ပန်းကန်လုံးထဲ့ကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါ ။ စားကောင်းစေရန် သကြားအနည်းငယ် သင် စားကောင်းစေလောက် သည့် အနေအထားသို့ထည့်ပြီး ခေါက်စားလိုက်ပါ ။ တခြားမည်သည် အရာမှ ရောစပ်ပြီး မစားရပါ ဘဲဥတလုံးကိုတော့ ကုန်အောင် စားရပါလိမ့်မည် ။ တနေ့ကို ဘဲဥတလုံးကို ကုန်အောင်စားရပါလိမ့်မည် ။ ထိုနည်းအတိုင်း Read more
သွေးကြောထုံးခြင်းအတွက် ခရမ်းချဉ်သီး ကုသနည်
သွေးကြောထုံးခြင်းအတွက် ခရမ်းချဉ်သီး ကုသနည်း သွေးကြောထုံးတာ လူအတော် များများကြုံရတဲ့ ပြသနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါ ခံစားသူအချို့က တခြားကုထုံး တွေအကြောင်း ဖတ်ဖူးထားတာမျိုး ရှိနိုင်ပေမယ့် ဒီခရမ်းချဉ်သီး ကုသနည်းလေးကိုတော့ သိချင်မှ သိကြပါလိမ့်မယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးမှ ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်း သိထားကြပေမယ့် သွေးကြောထုံးခြင်းကို ကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိရှိသူ အနည်းအကျဉ်း သာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ခရမ်းချဉ်သီးမှည့်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်းသုံး နည်း (၂) နည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်း ကုသနည်း ခရမ်းချဉ်သီးစိမ်း အနည်းငယ်ကို ရေဆေးပြီး အကွင်းလိုက်ဖြစ်အောင် လှီးပါ။ Read more
အသကျရှငျနဦေးမယျဆိုရငျဖြျောဖွပှေဲထပျလုပျခငျြသေးတယျဆိုတဲ့ မီးမီးခဲရဲ့ ဆန်ဒ
မီးမီးခဲကတော့ ဒုတိယမွောကျ တဈကိုယျတျော ဖြျောဖွပှေဲလုပျဖို့ ကွိုးစားနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ နောကျနှဈမှာ ကနျြးမာရေးကောငျးမယျဆိုရငျ ဖြျောဖွပှေဲလုပျခငျြတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မီးမီးခဲ ကတော့ သူမရဲ့ ဒုတိယမွောကျ တဈကိုယျတျော ဖြျောဖွပှေဲကို မန်တလေးမှာ ပွုလုပျဖို့ စဉျးစားထားတယျလို့သိရပါတယျ။ ဒီဖြျောဖွပှေဲကတော့ သူမအတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြ တဈခုပါပဲလို့ ဆိုပါတယျ။ “မီးမီးခဲ One Lady Show2next year (2021 )ကိုMandalay မှာ လာရောကျ ဖြျောဖွရေငျကောငျးမလား? ကြှနျမရဲ့ fans တှနေတေဲ့ နယျမြားကို Read more
ပဌာနျးမှာ မမွငျနိုငျတဲ့စှမျးအားတှပွေညျ့နကွေောငျး မွငျအောငျပွလိုကျတဲ့ ဆရာတျော
Unicode မစိုးရိမျတိုကျသဈ မန်တလေးမွို့မှ ဆရာတျော ဦးရာဇဓမ်ဗာဘိဝံသ ၏ ဩဝါဒတဈခုထဲတှငျ ပဌာနျးနဲ့ပတျသကျ၍ ရှတျဖတျပူဇျောမှုမြားကို သဘောတရားသိသညျဖွဈစမေသိသညျဖွဈစေ၊ နားလညျသညျဖွဈစေ နားမလညျသညျဖွဈစေ အာရုံဆိုကျရှကျဆိုရနျအတှကျ အောကျပါအတိုငျး မိနျ့ကွားခဲ့ပါတယျ။ မငျးတို့ ဂြာမဏီကလာတဲ့အားဆေးဂြာမဏီလိုရေးထားတဲ့ဆေးညှနျးကိုမဖတျတတျပမေဲ့အဲဒီအားဆေးစားရငျအားရှိသလိုပဲ ပဋ်ဌာနျးရဲ့သဘောတရားကိုရှတျရငျနာရငျအကြိုးရှိတယျအဓိပ်ပါယျနားလညျရငျတော့ပိုကောငျးတာပေါ့ကှာ ပရိတျတို့ပဋ်ဌာနျးတို့မှာမမွငျနိုငျတဲ့စှမျးအားတှရှေိတယျကှ။ မငျးတို့ဝါယာကွိုးထဲမှာလြှပျစီးရှိတယျ အခုဒီကြိုးကိုကိုငျရငျဓာတျလိုကျပါ့မလားမလိုကျဘူး ။ အဲဒါပလပျစတဈနဲ့အုပျထားလို့ (လြှပျကာပေါ့ကှာ) လြှပျကာကိုခှာပွီးအထဲကကွေးကွိုးကိုကိုငျရငျ ဓာတျလိုကျမယျ။ ဒါပမေယျ့လြှပျစီးကိုမငျးတို့မွငျရရဲ့လားကွေးကွိုးပဲမွငျရတာ။ ပရိတျတှပေဋ်ဌာနျးတှမှောလညျးလြှပျစီးလို မမွငျရတဲ့စှမျးအားတှရှေိတယျ ဟုမိနျ့ကွားခဲ့ပါတယျ ZawGyi ပဌာန်းမှာ မမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပြည့်နေကြောင်း မြင်အောင်ပြလိုက်တဲ့ ဆရာတော်မစိုးရိမ်တိုက်သစ် မန္တလေးမြို့မှ ဆရာတော် ဦးရာဇဓမ္ဗာဘိဝံသ ၏ ဩဝါဒတစ်ခုထဲတွင် Read more
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး (၂၄) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဂျပုမများဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်
မန်မာနိုင်ငံ ရှိ အပျိုဖော်ဝင် အရွယ် မိန်းကလေးများ၏ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပုညှက်နေကြောင်း မကြာမီက ထုတ်ပြန်ထားသော အာဟာရစစ်တမ်းတစ်ခုက ဖော်ပြသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လူသုံးသောင်း ကျော်ကို ကောက်ယူပြီး ထုတ်ပြန်ထားသော အဆိုပါ အာဟာရစစ်တမ်းတွင် အသက် (၁၀) နှစ်မှ(၁၄)နှစ် အရွယ်မိန်းကလေးများတွင် ပုညှက်နှုန်း ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိကာ ငယ်ရွယ်စဉ်က အာဟာရပြည့်ဝစွာ မစားသုံးခြင်းနှင့် လက်ရှိ၌ အာဟာရပြည့်မီစွာ မစားသုံးခြင်းကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာလွင်မာလှိုင်က Read more
ယနေ့ ကမ်ဘာကွီးဟာ ဆကျသှယျမှုလှယျကူလာတာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့နရော အနှံ့အပွားမှာ နထေိုငျသူတှဟော တဈဦးနဲ့ တဈဦးအလှယျတကူဆကျသှယျလာနိုငျကွပါပွီ…..ဒါကွောငျ့ မွနျမာနဲ့ ကမ်ဘာဟာ ခှဲခွားမရတော့ဘဲ မွနျမာပွညျကလူကလညျး နိုငျငံခွားကလူနဲ့ မတ်ေတာမြှလကျထပျလာကွသလို…နိုငျငံခွားကလူကလညျး မွနျမာကလူတှနေဲ့ မတ်ေတာမြှ ဘဝတဈခု ထူထောငျလာကွပါတယျ… တဈနရောစီ ဝေးနပေါစေ ဖူးစာပါရငျ ရနိုငျသလို ကမ်ဘာကွီးရဲ့ ဆကျသှယျမှုလှယျကူလာခွငျး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာခွငျးကလညျး အထောကျအပံ့တဈခု သဖှယျ ဖွဈနတောပါ….. ဒီလို ခဈြခွငျးမတ်ေတာမြိုးနဲ့ အိမျထောငျကခြဲ့သူတှေ ထဲမှာ မွနျမာပွညျက ကရငျလူမြိုးကောငျလေးတဈဦးနဲ့ နိုငျငံခွားသူကောငျမလေးတို့လညျး ပါခဲ့ပါတယျ…သူတို့ နှဈဦးဟာ လူမြိုးမတူနထေိုငျရာမတူကွပမေဲ့ ဖူးစာကွောငျ့ ဆုံတှခေဲ့ကွလို့ Read more
ဗိုလျခြုပျပိုကျဆံ တဈထောငျတနျနဲ့ ဈေးဝယျလို့မရတဲ့အကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ လူတဈဦး
Unicode ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီလ ၇ ရကျနမှေ့ာ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံပါ မွနျမာငှကေပျြ ၁၀၀၀ တနျတှကေို ပွညျသူတှလေကျထဲ ဖွနျ့ခြိခဲ့ပါတယျ…..နိုငျငံတျောဗဟိုဘဏျကနေ တရားဝငျဖွနျ့ခြိခဲ့တာဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျမှာလညျး ပွညျသူတှလေကျထဲ သုံးစှဲနကွေတာပါ…ဒါပမေယျ့ လတျတလောမှာတော့ ဗိုလျခြုပျပိုကျဆံနဲ့ ဈေးဝယျရာမှာ ဝယျလို့မရတဲ့ ဖွဈစဉျတဈခု ဖွဈပှားခဲ့တာကွောငျ့ တရားဝငျသုံးခှငျ့ရှိမရှိ မေးခှနျးထုတျထားတဲ့ Post တဈခု လူမှုကှနျရကျမှာ လူပွောမြားနတောပါ….. ကိုလှိုငျဝငျးထှနျးဆိုသူက အဲဒီအကွောငျးကို ခုလို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ပွောပွထားတာပါ…. “ကြှနျတေျာ့နာမညျ လှိုငျဝငျးထှနျးပါ …မျောလမွိုငျကြှနျးမွို့နယျ မွငျးကကုနျးကြေးရှာမှာနပေါတယျ…ယနညေ့နေ ၅နာရီခနျ့အခြိနျတှငျ ကြှနျတျောမိသားစုနှငျ့အတူ အိမျအတှကျလိုအပျသောဆနျဝယျရနျ ငှစေံပါယျ Read more
Unicode တဈနေ့ (၇) ခေါကျ ပုံမှနျရှတျရုံနဲ့ ထူးခွားပါလိမျမယျ။ သိကွားမငျး ဂါထာတျော ဝဒေါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ၊ ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ ၊ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု ဝေ = ငါ၏ရနျသူ ဟူသမြှတို့သညျ …. ဒါ = ဝေးစှာသော အရပျသို့ …. သာ = လငျြစှာ …. ကု = ပွေးကုနျသတညျး။ ကု Read more